တရုတ်အကြီးစား Cryogenic Coolant Circulator ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang တူရိယာများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Constant Temperature Water Bath Instrument ဖြစ်သည် > Water Circulation Universal Device ဖြစ်သည် > ကြီးမားသော Cryogenic Coolant Circulator
ကြီးမားသော cryogenic coolant circulator ဖြစ်သည်
The JH series ကြီးမားသော cryogenic coolant circulator ဖြစ်သည်Non-start-stop refrigeration နည်းပညာကိုသုံးသည်။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသည်စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်တိကျမှုမြင့်မားပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းသောအအေးပေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိရိယာများသည် PID အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးအအေးခံခြင်းနှင့်တိကျမြန်ဆန်သောအပူချိန်အအေးလိုအပ်သောအချို့စက်များနှင့်အညီလျင်မြန်တည်ငြိမ်သောအပူချိန်ကိုလက်ခံသည်။
1. ကြီးမားသော cryogenic coolant circulator ဖြစ်သည် Introduction
1: အပူချိန်ကိုထိန်းရန် non-compressor start-stop အမျိုးအစားကိုထိန်းချုပ်ရန်လျှပ်စစ်ချဲ့ထွင်မှုနည်းပညာကို သုံး၍ compressor ပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချပေးပြီးလျှပ်စစ်စွမ်းအား၏ ၂၀% ကိုသက်သာစေသည်။
၂ - အနိမ့်အမြင့်ရှိသောရေအဆင့်ကိုအလိုအလျောက်ထောက်လှမ်းခြင်း၊ အချို့တန်ဖိုးနိမ့်သောအခါအရည်ထည့်ရန်အလိုအလျောက်အချက်ပေးသည်။
၃: တင်သွင်းသော compressor တွင်အသံအနိမ့်နှင့်အအေးနှုန်းမြင့်သည်။
2. ကြီးမားသော cryogenic coolant circulator ဖြစ်သည် Parameter
လည်ပတ်နေသော pump စီးဆင်းမှု
3. Features of ကြီးမားသော cryogenic coolant circulator ဖြစ်သည်
၁: အအေးခန်းစနစ်သည်ဆူညံသံများကိုအနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့လျှော့ချပေးပြီးအအေးခန်းစွမ်းရည်ကိုသေချာစေရန်တင်သွင်းထားသော Taikang compressors များကိုသုံးသည်။
2: PID အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကိုသုံးပါ။ ရေခဲသေတ္တာသည်အစဉ်အလာ compressor start-stop အမျိုးအစားမဟုတ်ပါ၊ အီလက်ထရောနစ်တိုးချဲ့အဆို့ရှင်နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တည်ငြိမ်မှုကိုများစွာတိုးတက်စေခဲ့သည်။
၃: အအေးခန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွင်အပူချိန်ကျော်လွန်ကာကွယ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်အချက်ပေးစနစ်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ရေချိုးအရည်၏အနိမ့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအပူချိန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအမြဲတမ်းအပူချိန်ကြားခံပျက်စီးမှုကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးသည်။
4: ရေအဆင့်လေ့လာစောင့်ကြည့်သည့်ပြတင်းပေါက်နှင့်အလိုအလျောက်ရေအဆင့်ထောက်လှမ်းသည့်ကိရိယာတို့ပါ ၀ င်ပြီးရေ Level အလွန်နည်းနေလျှင် buzzer သည်အလိုအလျောက်အချက်ပေးလိမ့်မည်။
6: စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လည်ပတ်နေသောရေစုပ်စက်သည်ကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲအချိန်ကြာရှည်စွာအဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ လည်ပတ်နေသောပန့်ဖိအားမှာ ၀.၅ မှ ၁.၅ ဖာအတွင်းရှိသည်။ ပိုမိုအလိုလိုသိသောလည်ပတ်မှုအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ။
၇: အရောင်ပိုများသော LCD မျက်နှာပြင်ကိုဒေတာအချက်အလက်များပိုမိုပြသရန် အသုံးပြု၍ dynamic identifier သည်တူရိယာ၏လည်ပတ်မှုအခြေအနေကိုတစ်ချက်ကြည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
4. ကြီးမားသော cryogenic coolant circulator ဖြစ်သည် Supporting equipment
5. Main application of ကြီးမားသော cryogenic coolant circulator ဖြစ်သည်
1: သရုပ်ခွဲတူရိယာများ: spectrometer, mass spectrometer, viscometer, polarimeter, အချဉ်ဖောက်ပစ္စည်းများ၊ rotary evaporator;
၂ ။ ဆေးကုသမှု
၃: စက်မှုသုံးပစ္စည်းများနှင့်အခြားအရာများ - လေဆာပစ္စည်းများ၊ ဖုန်စုပ်စက်၊ ဇီဝဆေးဝါးများ၊ မှိုများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ ဖုန်စုပ်မီးဖိုများ၊ ဂဟေဆော်စက်များ၊ ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ
7. ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆောင်ရွက်ပေးသည်
မေး။ ။ မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီက Cryogenic Coolant Circulator အကြီးစားလုပ်ခဲ့တာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ။
hot Tags:: Cryogenic Coolant Circulator အကြီးစား၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE
E-mail ကို: i[email protected]